Cunista Rumaanka , Tufaaxa Iyo Liin Macaanta Oo Waxtar Weyn U Leh Caafimaadka! - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Cunista Rumaanka , Tufaaxa Iyo Liin Macaanta Oo Waxtar Weyn...
Koox khubaro oo jaamaacadda ka tirsan ayaa baadhis ku sameeyay midho ka mid kuwa Rumaanka , kuwaasi oo si rasmi ah u cadeeyay in uu unugyada maskaxada ka sakow uu waxtar weyn u leeyahay meelaha laabatooyinka jidhka .
Sida warbixintu cadaysay geedka Rumaanka ayay wakhtigan si weyn u isticmaalaan dhakhaatiirta qaabilsan unugyada iyo muruqyada.
Daraasad kale oo ay sameeyeen koox dhakhaatiir Ingiriis ah ayaa Iyana cadaysay in Liin macaantu ay waxtar weyn u leedahay dhinaca caafimaadka qofka. Waxaana ay sheegeen inay ku badan tahay Vetmin C, taasi oo faa’iido weyn u leh hargabka ama duriga, Daraasaddu waxa kale oo ay sheegtay inay Liintu xoojiso difaaca jidhka ee qofka iyo weliba inay ka kaalmayso difaaca jidhka in fayraska soo gala jidhka iska saaro.
Dhakhaatiirta ayaa intaasi raaciyay in Liinta iyo Tufaax labaduba ay dawo uga yihiin dumarka kansarka ku dhaca ugaxan sidaha. Dhakhaatiirta ayaa sugay in cuntaada ay ku jirto flavonoids ay tahay tan lagu daweeyo kansarka ugaxan sidaha, sidaa darteedna flavonoids ay ku jirto kuna badan tahay Tufaaxa iyo dhamaan noocyada liinta.
Previous articleMaareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo beeniyey in ay Wakaaladdu buyihii ka jartay Cisbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa.
Next article“Afar Arday Ayaanu Siin-doona Deeq Waxbarasho Oo Bilaash Ah”